Paartileen Siyaasaa biyyaalessaa mariisisaa qaama sadaffaan ala mari’achuuf waliigalan });
Paartileen Siyaasaa biyyaalessaa mariisisaa qaama sadaffaan ala mari’achuuf waliigalan
Paartileen Siyaasaa Biyyaalessaa qaama mariisisaa sadaffaan ala mari'achuuf waliigalaniiru.
Paartiiwwan kunniin wixinee danbii hojimaata marii fi adeemsa isaa irratti mari'ataa jiru.
Marsaa saddeettaffaa marii isaanii kanaarratti dhimma torban afuriif isaan falmisiisaa ture dhimma mariisisaa golabaniiru.
ADWUI dabalatee paartiiwwan siyaasaa 10 ol qaama mariisisaa sadaffaa malee nimari'anna ejjannoo jedhu qabatanii maricha keessaa ba'uunsaanii kan yaadatamudha.
Dhaabbati Tokkummaa Guutummaa Itiyoophiyaa dabalatee paartiiwwan siyaasaa 6 ammoo qaama mariisisaa sadaffaa barbaachisa jechuun marii marsaa torbaffaa irratti osoo walii hin-galin adda-ba'uunsaanii kan yaadatamudha.
Paartii Dimookraasummaa Itiyoophiyaa fi Dhaabbata Tokkummaa Guutummaa Itiyoophiyaa dabalatee paartileen ja'an guyyaa har'aa qaama sadaffaa nibarbaachisa fi marichi marsaan haa geggeffamu ejjannoo jedhu isaanii kaasuusaanii beeksisaniiru.
Wayita ammaas mariin kun mariisiftoota dhaabbiidhaan paartilee siyaasaa keessaa filatamaniin haa geggeeffamu yookiin marsaan paartiiwwan siyaasaan haa geggeeffamu dhimma jedhu irratti paartiiwwan kunnin falmii geggessaa jiru.